सयपत्री हाइड्रोपावरले असार २ गतेदेखि आइपीओ निष्काशन गर्ने, क–कसले दिन पाउछ आवेदन ? - Beemapost.com
सयपत्री हाइड्रोपावरले असार २ गतेदेखि आइपीओ निष्काशन गर्ने, क–कसले दिन पाउछ आवेदन ?
२४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १०:४७
काठमाडौं । पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीहरुले पालैपालो आइपीओ निष्काशन गरिरहेका छन् । असार १ गतेमात्रै २ वटा कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्ने मिति तय गरिसकेका छन् । आदर्श लघुवित्त र मन्दाकिनी हाइड्रोपावरले असार १ गते आइपीओ निष्काशनको मिति तोकेका हुन् ।
यसैबीच सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेडले पनि असार २ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यका ३ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र अर्थात बाग्लुङ्ग जिल्ला ताराखोला गाउँपालिका र गल्कोट नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने बासिन्दाहरुका लागि सो शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।
निष्काशन बन्द छिटोमा असार १६ गते हुनेछ भने ढिलोमा असार ३१ गते हुनेछ । आईपीओमा प्रभु बैंकको ताराखोला र गल्कोट शाखा, ग्लोबल आइएमई बैंकको गल्कोट शाखा, कामना सेवा विकास बैंकको गल्कोट हाखा र एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, काठमाडौँबाट आवेदन दिन सकिनेछ। यसका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा ३० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।